राजनीतिमा युवा कि सचेत युवा ?
- चण्डिका तिमल्सिना
माओले भनेका थिए, ‘युवाहरू यो देश तिमीहरूको हो, यो देश हाम्रो पनि हो । तर, अन्तिममा यो देश तिमीहरूको नै हो ।’ आफैँ कुनै बेला कुनै कारणले नेपालमा माओवादी लहर हुँदा कुनै तहको ‘माओवादी’ शुभेच्छुक रहेकाले यो वाक्य झलझल्ती सम्झिरहन्छु । माओको सिद्धान्तलाई आदर्श मान्नेहरूले नै युवावर्गलाई केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको खुट्किलो बनाएकोमा निकै दु:ख लाग्छ ।
माओले भनेझैँ देश युवाहरूको नै हो र देश बनाउने जिम्मा पनि युवाहरूको नै हो । देशको हरेक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको इतिहास हेर्ने हो भने परिवर्तनका हरेक इतिहासमा युवाहरूको भूमिका अग्रस्थानमै रहेको पाइन्छ ।
हिजोको पुस्ता राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध लड्न डराएको भए वा चुकेका भए आज हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाउने थिएन । यो उपलब्धिको उपभोग गरिरहँदा त्यो संघर्ष र योगदानको सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । तर, हजारौँको योगदान र बलिदानबाट लामो संघर्षपश्चात् आएको लोकतन्त्र आज सत्तामोहले गिजोलेका निर्वाचित तानाशाहहरूका कारण धरापमा परेको छ ।
संसारका परपक्व भनिने लोकतन्त्रमा पनि यस्ता संकट हरेक पटक आइरहन्छन् भने हाम्रो काँचो लोकतन्त्रमा आउनु अस्वाभाविक होइन् । अब यस्ता तानाशाह मात्र होइन, हरेक प्रतिगामी प्रवृत्तिबाट यो व्यवस्थालाई जोगाउने जिम्मा हाम्रो पुस्ताको हो ।
हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अब छैन, किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो । यही व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई समानता र समृद्धि सम्भव छ । यसमा सामयिक सुधार र परिमार्जन त जरुरी हुन्छ नै । अब हाम्रो संघर्ष यो व्यवस्था बचाउन र यसलाई अझ उन्नत बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनपर्छ । अब हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने खालको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक नै सबैभन्दा ठूला शक्तिकेन्द्र हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नागरिक आवाज दबाउन लागिपरेका स्वघोषित ‘वादशाह’लाई पाखा लगाउनतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ ।
हुन त ‘आउटडेटेड’ र भ्रष्ट नेतृत्वबाट देशले निकास पाउन सकेन, युवा राजनीतिमा आउन पर्‍यो भनेर हामीले भनिरहँदा राजनीतिमा कस्ता युवाको आवश्यकता छ भन्नेतर्फ सोचिएन भने पनि समस्या आउँछ । हाम्रो देशको राजनीतिमा युवा मात्र होइन, सचेत र सक्षम युवाको खाँचो छ । युवा राजनीतिमा आउँदैमा देश बनिहाल्ने त होइन । तर, देश बन्नका लागि सचेत युवा राजनीतिमा आउन जरुरी छ । युवा हुनका लागि युवा उमेर, जोस, बल र ऊर्जा भए पुग्छ होला । तर, सचेत युवा हुनका लागि, युवा उमेर, जोस, बलले मात्र पुग्दैन । विचारमा नयाँपन, अध्ययनशील, वैचारिक, तार्किक, देशप्रति जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ हुन आवश्यक छ ।
के अहिलेको युवावर्ग देशप्रति सचेत छ ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । युवावर्गमा पनि हल्लाको पछि, भीडको पछि दौडिनेकाे संख्या धेरै छ । ठूला/पुराना दलका कुनै नेताको आमसभामा लाखौँको संख्यामा उपस्थित हुन सक्ने युवा जमातहरू, उखु किसानको आन्दोलनमा उपस्थित हुन भ्याउँदैनन् । ठूला नेताको आह्वान भएका ठाउमा जहाँ पनि पुग्न सक्ने, जति अराजक बन्न पनि तयार हुने युवाहरू देशमा भएका समसामयिक मुद्दामा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आफ्ना आवाज उठाउँदैनन् ।
दलको झण्डा बोक्न र आफ्नो गुटको नेताको बचाउ गर्न जे पनि गर्ने अनि नागरिकको जिम्मेवारीमा पर्ने सामान्य जिम्मेवारी समेत बहन नगर्ने युवा जमातलाई कसरी सचेत युवा भन्ने ? उनीहरूले देश बनाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?
राजनीतिक दलमा लाग्ने कि राजनीतिको दलदलमा फस्ने ?
धेरैजसो पुराना राजनीतिक दलमा कार्यकता युवा नै छन्, वरिष्ठ नेताका अघिपछि लाग्ने युवा नै छन् तर नेतृत्व तहमा युवा सहभागिता छैन । कार्यकर्ता भएका युवाहरू पनि विचारको र इमानको राजनीति गर्नेभन्दा व्यक्तिवादी र नेताभक्त नै बढी छन् । गुट उपगुटमा रमाइरहेका छन् । वरिष्ठ नेताको ‘भक्त’ बन्नुलाई राजनीतिक उचाइ हासिलको छोटो बाटो सोच्नेहरू आफ्ना नेताको जतिसुकै ठूलो कुकृत्यलाई पनि नजरअन्दाज गरिदिन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा आलोचनात्मक चेत शून्यबराबर भएको छ ।
आलोचनात्मक चेत, मानवीय संवेदना र विवेकको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने युवाकाे खाँचाे देशलाई छ । आलोचनात्मक चेतबिनाको युवा मात्र होइन, कुनै पनि मानिस मानिस कहलिन सक्दैन । आफ्ना नेताको अनैतिक कदमलाई सहर्ष स्वीकार्ने र अझ प्रतिरक्षामा उत्रेर जे पनि गर्ने प्रवृत्ति अहिले त राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ ।
आफ्ना नेताको आलोचना गर्न नसक्नेले आत्मालोचना पनि गर्न सक्दैन । आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना नगर्ने युवा नेतृत्वमा पुगिहाले पनि उसबाट सुसंस्कृत अभ्यास र प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यदि आफ्नै नेताको आलोचना र आफ्नै पनि आत्मबोध गर्न नसक्ने युवा राजनीतिक दलमा लाग्नु भनेको राजनीतिको दलदलमा फस्नुजस्तै हो । त्यो अर्थहीन हुन्छ ।
राजनीतिमा कस्ता युवा ?
युवा नेतृत्व भन्नेबित्तिकै हामी आशा र सम्भावनाका ठूलाठूला सपना देख्छौँ । तर, युवा राजनीतिमा आउँदैमा सब ठीक भइहाल्छ भन्ने जब्बर तर्क होइन । नेपालको राजनीतिमा युवा होइन, सचेत युवाको खाँचो छ । किनकl आजकल, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर बाइक ‍र्‍याली गर्ने पनि युवा जमात नै छ । भ्रष्ट नेताको र्‍याली स्वयम्‌सेवक पनि युवा नै छन् । राजतन्त्र कति निरंकुश थियो र राजतन्त्रको प्रताडना नागरिक माथि कस्तो थियो भन्ने थाहा नभएकाहरू हल्लाको पछाडि दौडिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् भने तिनीहरूको हुल लिएर युवा नेतृत्व गर्छु भनेर कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन ।
केपी ओलीको ५ पुसको असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशभर प्रदर्शन भइरहँदा पनि ओलीको पक्षमा नारा जुलुस गर्ने, 'बोली अलि पिरो हो, केपी ओली हिरो हो' भन्ने पनि युवा नै हुन् । ओली टिकाउने कि व्यवस्था टिकाउने भन्ने प्रश्न गरियो भने ओली टिकाउने भन्ने खालको जवाफ दिने त्यो युवाजमातलाई कसरी सचेत युवा भन्ने ?
हिजो कोरोना कहरमा प्रधानमन्त्रीले 'बेसारपानी खायो भने हाछ्युँसाछ्युँ गर्‍यो भने कोरोना भाग्छ' भनेर बकवास सुझाव दिँदा पनि ‘आहा ! हाम्रो प्रमले ठीक भने, जनतामा आत्मविश्वास जगाउन त्यसो भने’ भनेर ताली बजाउनेहरूलाई कसरी सचेत युवा भन्ने ? ती युवा कसरी युवा चेतनाका संवाहक हुन्छन् जसले देखादेखी संविधानको हत्या गर्ने निरंकुश र निकृष्ट सरकारप्रमुखको जयजयकार गर्छन् । ती युवाभन्दा त स्वयम् केपी ओली ‘युवा’ हुँदा उन्नत चेतनाका थिए होलान् ।
अनि ओलीको भक्त बन्दैबन्दै पदमा पुगेका युवा नेतृत्वबाट देशले के पाऊला ? के आशा गर्ने ? राजनीतिमा युवा सहभागिता भन्ने शब्दले जति आशा बोकेर ल्याउँछ, राजनीतिमा सचेत युवाको कमीले त्यति नै निराशा थपिदिएको छ । अर्थात् अर्को शब्दमा, राजनीतिमा युवासँगै युवामा नैतिक/राजनीतिक सचेतना आवश्यक छ । यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा राजनीतिक दल चुकेका छन् । युवानेतालाई विश्वास गर्ने कुरामा नागरिक चुकेका छन् । तर, युवावर्ग कहाँ चुकेका छन् ? त्यो पनि विचार गरौँ । युवानेताको नाममा उही पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै खेलमा पात्र मात्र नयाँ फेरिने हो भने उही तानाशाही र भ्रष्टहरूको फोटोकपिले देशलाई निकास दिन्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।
तसर्थ, नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्व होइन, सचेत युवा नेतृत्वको खाँचो छ । युवा चेतनामा नवप्रवर्तनको खाँचो छ । अध्ययनशील, वैचारिक, तार्किक र बौद्धिक युवाहरूको खाँचो छ जसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत देखोस् । जसले माथिल्लो तहको नेताको कुकृत्यविरुद्ध खुलेर बोल्न सकोस्, पदको होइन विचारको राजनीति गरोस् र राजनीतिमा आउन चाहने धेरै युवालाई राम्रो सन्देश दिन सकोस् ।
(तिमल्सिना विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १५, २०७७, १३:०५:००